हात काटेर मन्दिरमा खुनको सिन्दुर लगाइ दिएका यि शिक्षकले अहिले आएर बिचल्ली बनाएपछि रुँदै मिडियामा आइन यि महिला - dautarimedia.com
झापा । अहिले नेपालमा श्रीमान् श्रीमती बिचका बिबादहरु धेरै आउने गरेका छ्न । झापाको बुधबारेमा बस्ने एक युवकले आफू भन्दा ५ बर्ष जेठी युवती संग बिगत १ बर्ष देखि लिभिङ टुगेदरमा बसेको र अहिले आफुलाइ छोडेर फरार भएको भन्दै मिडियामा आएकी छिन।उनले आफुलाइ त्यो युवाले मन्दिरमा लगेर सिन्दुर सम्म हालिदिएको बताएकि हुन ।
धरानमा पसल चोरेको आरोपमा २ जनालाइनै प्रहरीले पक्राउ गरेको तर उस्लाइ उस्को परिवारले धरौटीमा छुटाएको आफुलाइ कसैले वास्ता नगरेको उनले बताइन । ती युवकले आफ्नो गर्बपतन गराएको र आफू संग बिहे गर्छु भन्दै अहिले बिचल्ली बनाएको उनको आरोप रहेको छ । आफना पीडा सुनाउदै ती महिला धुरुधुरु रोइन । के हो सत्य कुरा ? तल भिडियोमा हेर्नुहोला
Previous: कतार,साउदी अरब,मलेसियामा काम गरी फर्किएका पुरुषहरु अब बाउ बन्न नपाउने? कारण यस्तो छ
Next: सानिमा लाइफ इन्स्याेरेन्सको आईपीओ खुल्यो